Xaafadaha Garsoor Iyo Wadajir Oo Laysu Furay Iyo Dagaalkii Galbeedka Xaafadda Garsoor Oo Laga Heshiiyey – Codka Qaranka Tanadland
Xaafadaha Garsoor Iyo Wadajir Oo Laysu Furay Iyo Dagaalkii Galbeedka Xaafadda Garsoor Oo Laga Heshiiyey
Maalinkii shalay ahaa waxaa laysufuray xaafadaha (Garsoor) Iyo (Wadajir) oo mudo sanad ah kala xirnaa, iyo suuqa weyn ee magaalada Gaalkacyo oo 95% ay leeyihiin reer Tanadland. Furitaanka wadooyinka isku xira degaamada reer Tanadland iyo beesha Sacad, ayaa wuxuu ka danbeeyey wadahadal iyo heshiis is-afgarad oo dhexmaray labada umaddood.
Waxaa kaloo jirta in shirka hada umadda Tanade-weyne uga socda magaalada Gaalkacyo marka uu dhamaado, lagu balamay in shir ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta reer Tanadland iyo Galmudug. Iyadoo ajendeyaasha shirkaas looga wada hadlidoono ay isugu jiraan iskaashi dhaqaale iyo siyaasadeed. Isu furitaanka xaafadaha (Garsoor) Iyo (Wadajir) ayaa mudo 5 jeer ah waxaa warbaahinta laga sheegay in lagu heshiiyey in laysu furo. Shan taas heshiisna waxay u fashilmeen waxay ahayd, dadka heshiiska gaarey oo an ahayn dad ay talada isufuridda labada xaafadood ay ka go’do.
Laakiin heshiis kaani wuxuu uga duwanyahay 5 tii heshiis ee hore oo fashilmay, go’aanka isufuridda xaafadaha (Garsoor) Iyo (Wadajir) waxaa gaarey oo si dhaqso ah u fuliyey labada beelood ee talada isufuriddu ay ka go’do. Oo ah beelaha reer (Cali khayr) ka koonfureed iyo Sacad. Laakiin run ahaantii heshiisyo ku sheegyadii hore waxay ahaayeen khiyaali been ah oo aysan awood u lahayn dadka ka qayb qaatay inay fuliyaan. Waana sababta heshiis ku sheegyadii hore oo dhami ay u ahaayeen hadalo been ah oo warbaahinta laga sheegay.
Waana sababta isla maalintii shalay ahayd oo siyaasiyiinta reer Tanadland iyo madaxweyne (Axmed Ducaalle Geelle “Xaaf”) ay kulmeen heshiiska loo fuliyey. Walow heshiiska labada dhinac ay horay si hoose ugu heshiiyeen oo lala sugahayey in la fuliyo, marka madaxweynaha Gal-mudug uu yimaado magaalada Gaalkacyo.
Waxaa kaloo xusid mudan in xiritaanka isusocodka degaamada beesha Sacad iyo reer Tanadland inay ka dhalatay dagaalkii ka dhacay galbeedka xaafadda Garsoor sanadkii 2016-da. Shantii heshiis ee horey warbaahinta looga sheegay in xaafadaha Garsoor iyo Wadajir laysugu furahayo. Waxaa ku gacan sayray oo diidanaa ciidamad reer Tanadland ee fariisinkoodu uu yahay suuqa iyo koontaroolka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo. Reer Tanadland na marna raali kama aysan noqonkarin inta beesha Sacad ay ka qaadanayso qaladka dagaalkii dhacay, oo labada umaddood heshiis ka gaarahayaan dagaalkii dhacay. Miyo iyo magaaloba inaan wax isu gudbaa aysan jirin degaamada labada beelood.
Balse heshiiskan deg-dega loo fuliyey oo dhexmaray beelaha reer (Cali Khayr) ka koonfureed iyo Sacad. Beesha (Reer Khayr) waxay qaaday ciidamadii ka joogey suuqa magaalada Gaalkacyo iyo koontaroolka koonfureed. Beesha sacad na waxay qaadeen jidgooyadii ay dhigteen koontaroolka koonfureed meesha u muuqata. Oo dhawrka jeer dagaalku uu ka dhashay. Hawlgalkaan waxaa docdeena kawakiil ahaa oo fuliyey ciidamada qalabka sida ee Tanadland, xildhibaanada iyo siyaasiyiinta reer Tanadland. Docda kalena madaxweyne Xaaf iyo beeshiisa. Hawshana waxaa loo fuliyey si wadajir iyo niyadsami ah.
Docda kale, shirkii aayo ka tashiga umadda reer Tanadland ee Gaalkacyo ka socdey, ayaa mar aan maantay la hadlay mid ka mid ah gudiga loo saaray inay lafoguraan talooyinkii ergada shirka. Oo ka baaraandegid qoto dheer kedib ay soo saaraan qaraarada gundhigga u noqondoona natiijada shirka. Ayaa wuxuu ii sheegay in maalmaha soosocda inay shirka soo xirayaan oo umada Tanadland ay u soo gudbin doonaan qaraarada shirka ka soo baxa.